नेपालमा थप १६६ जनामा कोरोना देखियो – सडक मिडिया
नेपालमा थप १६६ जनामा कोरोना देखियो
सडक मिडिया May 31, 2020 0
काठमाडौं: अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा थप १६६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । बितेको २४ घण्टाको अवधिमा नेपालमा थप १६६ जनामा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लाे अध्यावधिक विवरण अनुसार शनिवार नेपालमा थप १६६ जनामा कोरोना देखिएको छ । यो सँगै संक्रमितको संख्या १ हजार ५ सय ६७ पुगेको छ । शनिवार दिउँसाे नियमित प्रेस ब्रीफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले अहिलेसम्म कोभिड-१९ पुष्टि भएका व्यक्तिको सङ्ख्या १ हजार ४ सय १ पुगेको जानकारी दिएका हुन् ।
पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म ६६ हजार ७ सय २९ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ । यस्तै आरडिटी विधिबाट १ लाख ११ हजार १०९ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ । त्यस्तै देशभर १ लाख १९ हजार १९२ जना क्वारेन्टाइन रहेका छन् भने जना १ हजार ३४९ आइसुलेसनमा रहेका छन् ।
त्यस्तै आज थप १३ जना काेराेना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार १७२ जना पुरुष र ४८ जना महिला गरेर हालसम्म डिस्चार्ज हुनेकाे संख्या २२० पुगेकाे छ ।
Previous Post: पाँच महिनाकी गर्भवतीले कोरोनालाई जितेर घर फर्किइन्
Next Post: आरडीटी पोजिटिभ देखिएका ४ जनालाई भैंसी गोठमा राखियो
करन जोहरलाई ब’हिस्कार: अक्षय कुमार र रोहित सेट्टीले फिल्मबाट निकाले 6,506 views
दाङपछि काठमाण्डौंमा फेसवुक लाइभ गरेर युवतीले गरिन दे’हत्याग (भिडियो ) 5,244 views
अर्का अभिनेताले पनि रोजे सुशान्तको बाटो…हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ! 5,075 views
सुशान्तको अन्तिम फिल्ममाथि आइपर्यो ठुलो आपत….. 4,711 views
नेपालमा न्युज च्यानल बन्द भएपछि भारतीय मिडियामा खैलाबैला, कसले के लेखे? पढ्नुहोस 2,708 views
बला’त्कारपछि ह’त्या अभि’याेगमा अ’घोरी बाबा प’क्राउ 2,638 views